Ombiasa - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Ombiasy)
Ny ombiasa na ombiasy na mpimasy dia olona misahana ny fitsaboana sy ny fiarovana amin'ny fanahy ratsy na ny ody ratsy eo amin'ny fiarahamonina malagasy mandala ny finoan-drazana malagasy. Maro ny zavatra sahanin'ny ombiasa, ka ao ny fitsaboana ny aretin'ny vatana na ny aretin'ny saina amam-panahy, ny famantarana ny hoavy sy ny zavatra tsy hita. Atahorana koa ny ombiasa satria mahay mamorika na mamosavy amin'ny alalan'ny fampiasana ody ratsy. Ny maha ombiasa dia asa fivelomana ho an'ny ombiasa maro. Olona mahafehy ny fahalalana ny hasin'ny zava-maniry manodidina azy ny ombiasa ka manam-pahaizana momba ny raokandro. Mety ho sady mpitazona ody ny ombiasa no mpanandro sy mpisikidy ary mpanolo-tsaina eo amin'ny fiaraha-monina. Misy koa anefa ireo inoan'ny olona fa mitazona ody ratsy hamorehana na ho enti-mangalatra sns. Sady hajaina noho izany ny ombiasa no atahorna.
Sary sokitra maneho ombiasy iray amperin'asa.
2 Ny asan'ny ombiasa
2.1 Ombiasa mpanadro
2.2 Ombiasa mpisikidy
2.3 Ombiasa mitazona ody
2.4 Ombiasa mpitsabo amin'ny zavaboary
Ny teny hoe ombiasa na ombiasy dia mety avy amin'ny fanakambanana ny teny hoe ona (izay midika hoe "olona" amin'ny fiteny malagasy betsileo), sy ny hoe be ary ny hoe hasina, ka midika ara-bakiteny hoe "olona be hasina".
Ny asan'ny ombiasaModifier
Maro amin'ny ombiasa malagasy no mahay manandro. Ampiharany ny fifandraisan'ny fotoana ahatanterahan'ny zavatra iray amin'ny toerana sy ny toetran'ireo zavatra eny amin'ny lanitra, mba hahafantarany ny vintana mifanandrify amin'izany sy ny mifanohitra amin'izany. Ilain'ny Nataolo malagasy sy ny Malagasy maro ankehitriny ny manontany ombiasa mpanandro alohan'ny hiterahana, hanamboarana trano na fasana, hanaovana hasoavana na fanambadiana, hisantarana na hitokanana zavatra, handevina sns.
Isan'ny ahafantarana ny ombiasa malagasy ny sikidy. Hatonin'ny olona te hahafanta-javatra miafina na saro-pantarina ny ombiasa mpisikidy. Manatona mpisikidy ny olona hanamboatra trano, handeha lavitra, hamantatra na hanenjika ny olona nangalatra ny fananany, hioty ny vokatry ny famboleny, hampaka-bady, marary, te hahafantatra ny fomba hampitomboany ny hareny, sns. Ny mpandinika ny tantaran'ny sikidy malagasy dia mihevitra fa ny Antemoro no nahay nisikidy voalohany indrindra amin'ny Malagasy. Matetika aorian'ny fisilidiana vao manambara ny zavatra tokony hatao ny ombiasa: ny sorona na ny ala-faditra tokony hatao, ny volon'ny omby hisoronana, ny volon'ny akoho hovonoina, ny toerana tokony haleha hanipazana na handevenana na handrarahana ody, ny endriky ny vavaka tokony hatao amin'ny razana sy ny zanahary, ny zava-maniry tokony hampiasaina, ny andro tsara tokony hanatanterahana ny zavatra tian-katao, sns.
Ombiasa mitazona odyModifier
Ahafantarana indrindra ny ombiasa koa ny fitazomana ody, ka ny mahery indrindra amin'izany ody izany dia ny mohara na sampy. Mety atao hanasoavana ny olona sy ny fiarahamonina ny ody, ka ampiasaina hanasitranana, handroahana ny fanahy ratsy, hiarovana amin'ny fisomparana, hampitomboana ny harena sns. Mety azo ampiasaina amin'ny fanaovan-dratsy koa ny ody, toy ny famorehana olona mba harary na hofaty, na mba tsy hahomby eo amin'ny fiainana. Inoan'ny Malagasy ny fisian'ny ody fitia, ny ody varatra, ny ody havandra, ny ody bala (balam-basy) sns.
Ombiasa mpitsabo amin'ny zavaboaryModifier
Mahafantantra sady mampiasa ny zava-maniry isan-karazany (atao hoe volohazo) ny ombiasa mba hanasitranany ny aretina. Tsy afa-misaraka amin'ny fiantsoana ny razana sy ny fanahy hafa anefa izany mba hahomby kokoa, satria maro amin'ireo aretina tiana hositranina no inoana fa manam-pifandraisana amin'ny tontolon'ny fanahy, ka heverina fa mety sazy na fampitandremana avy amin'ny razana na avy amin'ny Zanahary na avy amin'ny hery tsy hita maso hafa ilay aretina. Nampiasain'ny ombiasa hitsaboany koa ny zavatra hafa toy ny rora, ny dinitra, ny volo, ny taolana, ny hodi-biby, ny volom-borona, ny tany, ny vato, sns. Noho ny fanaovana raokadro sahanin'ny ombiasa dia maro amin'ny Malagasy kristiana ny tsy tia mampiasa zavamaniry hitsaboana satria ataony fa fivavahana amin'ny devoly na demony izany.
Renel, Charles Les amulettes malgaches Ody et Sampy. Notice BNF n°: FRBNF43591087
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ombiasa&oldid=997539"
Dernière modification le 6 Oktobra 2020, à 08:59
Voaova farany tamin'ny 6 Oktobra 2020 amin'ny 08:59 ity pejy ity.